Patriotic zvisungo: imwe nzira yekudyara | Ehupfumi Zvemari
Chimwe chezvinhu zvisingazivikanwe zvigadzirwa nevashambadzi vadiki nepakati zviri pachena izvo zvinonzi zvisungo zvekuda nyika. Saka kuti iwe uzive zvirinani zvirinani izvo zvakagadziriswa mari inotora chigadzirwa, tinokupa makiyi echimiro chayo uye nemabatiro aungaihaya kubva ikozvino. Nekuti zita rayo hazvireve kuti iri chigadzirwa chemunyika uye izvo zvakagadziriswa mune yega yega nharaunda dzakazvimirira dzenyika yedu.
Patriotic zvisungo zvakave nekushambadzira kwakashata mumakore achangopfuura nekuda kwenjodzi dzakawanda dzakabatanidzwa mukuita kwavo basa. Kusvika pakuti ivo vaigona kurasikirwa nechikamu chemari yakachengetwa uye ichi ndicho chikonzero chaicho chekuratidzira yakakwira chimbadzo kupfuura zvakajairwa mune aya kesi. Sechikurudziro chekuti vapihwe basa nevashambadzi vadiki nepakati. Chero zvazvingaitika, zviri nyore kusimbisa kuti isu tiri kubata neyakagadziriswa mari yechigadzirwa iyo yakati wandei.
Patriotic zvisungo zvinonyanya kuratidzwa neavo kusagadzikana kukuru, kunyangwe kana dzakabatana nemari yakatarwa. Mupfungwa yekuti purofiti yayo inogona kusiyana zvakanyanya kubva pane imwe nyaya kuenda kune imwe uye mukati memharaunda imwechete inozvitonga. Nemisiyano iyo inogona kusvika akati wandei muzana mapoinzi uye inomiririra mari yakawanda mukudyara kunoitwa nevadiki nepakati varimi. Kubva pane ino maonero, zvinogona kutaurwa zvakachengeteka kuti inyonganiso yemari chigadzirwa uye hairatidze kufanana kumwechete mumakore.
1 Patriotic Bonds: Dzazvino Nyaya
2 Green uye magariro zvisungo
3 Kubatsira kwezvisungo izvi
4 Zvakanakira zvisungo zvemuno
5 Kukanganisa kwekuda nyika
6 Musiyano kubva kune imwe nharaunda kuenda kune imwe
Patriotic Bonds: Dzazvino Nyaya
Panguva ino iri chaizvo iyo Dunhu reMadrid iyo yakatamira kumusika painotanga chigadzirwa chemari yezvinhu izvi. Nekuti zvirizvo, nyaya nyowani yezvisungo zvisungo "bhenji" yeCommunity yeMadrid yemari inosvika 1.250 mamirioni euros yakagamuchirwa mukutengesa paBME AIAF Musika. Ichi chikamu cheshanu chakaburitswa chakaburitswa nePublic Administration mumusika weAIAF kubva muna 2016, izvo zvinoita kuti chive mucherechedzo mupi wezvemari inochengetedza uye inosanganisa Musika weAIAF sechiyero cherudzi urwu rwekuburitswa.
Izvo zvisungo zvine kukosha kweumwe neumwe 1.000 euros uye yakatarwa coupon yegore ye 1,571%. Zuva rekupedzisira rekudzikisa mari ndiApril 30, 2029. Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti masangano emari BBVA, HSBC, ING, Banco Sabadell neBanco Santander vakashanda seBhukurununura yenyaya iyi. Nharaunda yeMadrid ine zviyero zve Baa1, kudzikama kwemaonero, kwakapihwa naMoody's; BBB +, yakadzikama maonero, neS & P, BBB, yakagadzikana, neFitch uye A-, yakagadzikana, neDBRS.
Green uye magariro zvisungo
Gonzalo Gómez Retuerto, General Director weBME Renta Fija, anonongedza izvo "Green uye zvemagariro zvisungo zvazova kirasi yefa mukati mavo uye zvinonyanya kudiwa nevashambadzi vekunze". Huwandu hwakazara hwakaburitswa muna2018 hwerudzi urwu rwefuma hwakapfuura mamirioni zviuru gumi nematanhatu emadhora. "Vanopa Spain vanotora chinzvimbo chepamusoro chechitanhatu pachinzvimbo chepasi rose." Nharaunda yeMadrid ndiyo yekutanga yeSpanish Public Administration iyo yakakumbira kuburitsa mumusika wezvisungo mari zvirongwa zvemagariro kunyanya, kuratidza kunetseka kukuru kweCommunity kweasina-kuomarara mamiriro ezvemari senge shanduko yemamiriro ekunze nekusimudzira.
Pane ino chiitiko, iyi modality mukudyara inopa a purofiti padyo ne1,50%, kana chii chakafanana, chakakwirira kupfuura icho chinogadzirwa nemidziyo mikuru yemabhengi. Pakati pavo, nguva yekuisa mari, manotsi ekuvimbisa kubhengi kana kunyange maakaundi ane goho repamusoro, umo zviitiko zvese hazvipe zvinopfuura 0,75% mukufarira kune vavanobata. Zvisinei, izvo zvinonzi kuda nyika zvisungo hazvina dhipoziti garandi fund, sezvazviri zvinoitika nezwi dhipoziti. Muchiitiko chechero chiitiko icho chinoburitsa zvinhu zveichi chigadzirwa chemari chinogona kukura. Mune ino kesi, nharaunda dzakazvimiririra pachavo.
Kubatsira kwezvisungo izvi
Chiyero chemubereko chinogadzirwa nekirasi ino yezvigadzirwa zvemari hazviwanzo kufanana, kunyangwe munharaunda imwechete inodzivirira. Iwe unogona kazhinji kutenderera pakati pe1% uye kusvika pa8%. Iko iko kwakaomeswa mime kunozadzikiswa uye ndizvozvo sezvo njodzi iri pamusoro iyo purofiti iri pamusoro. Ndiyo nzira inotungamirwa nezvisungo zvekuda nyika. Mune mamwe mazwi, kana iwe uchida kuwana mubairo une rupo, hapana chaunogona kuita kunze kwekutora dzimwe njodzi. Mune mamwe akakwirira kwazvo semhedzisiro yenyika yekukwereta mune dzimwe nharaunda dzakazvimiririra dzenyika yedu.
Kune rimwe divi, zvinofanirwa kucherechedzwa kuti mubhadharo wako wave mukukura, uko avo vanobata vanogashira zvipo zvavo zvehupfumi pamwe nezvinodiwa zvinoenderana. Pasina mamiriro ezvinhu pachave neshanduko muyero yemubereko inopihwa vatengi vebhangi. Izvo hazvizungunuke zvachose sezvo isu tisingakwanise kukanganwa kuti tiri kutaura nezve yakatarwa yemari chigadzirwa. Iine zvayakanakira nezvayakaipira uye ichi ndicho chinhu chatinofanira kuongorora kubva zvino zvichienda mberi kuti tione kana zvichikurudzirwa kuvashandira.
Zvakanakira zvisungo zvemuno
Imwe yemipiro yezvisungo zvekuda nyika ndeyekuti ivo vanokwanisa kusvika kunatsiridza muripo yezvinhu zvakajairika zvakagadziriswa mari yemari. Mune mamwe mamiriro ezvinhu, nemusiyano wakakura unouya kubva pakusarudza iyi modhi yekudyara kunyangwe paine njodzi dzinowanikwa mukunyorera kwayo. Imwe yenyaya dzayo yakakosha mabhenefiti inowana kubva pakuti iwe une akawanda mabhonasi eaya hunhu kusarudza kubva. Zvinenge zvese nharaunda dzakazvimiririra dzemunyika yedu dzine fomati senge iri kubvunzwa muchinyorwa chino. Basque Nyika, Catalonia, Andalusia, Navarra, La Rioja, Castilla y León, nezvimwe.
Chero zvazvingava, hazvireve kuti zvisungo zvekuda nyika zvinogara zviripo. Nekuti haisi chaizvo nzira iyi, kubvira payakatepfenyurwa zvinoenderana nezvinodiwa nemari yenzvimbo yakazvimiririra pachayo. Uye zvinogona kutora nguva yakareba kuti ivo vaite kuburitswa kwemhando idzi dzezvigadzirwa zvemari. Beyond kumwe kufunga kwehunyanzvi. Izvo zvekuti isu tiri kubata neye isiri-yakaoma zvemari chigadzirwa inoitambawo mukubatsira kwayo. Izvo zviri nyore kuita zvepamutemo uye hazvidi kudzidza kuti unzwisise zvese zvarinogadzira.
Kukanganisa kwekuda nyika
Kunyangwe pane zvinopesana, isu tinofanirwa zvakare kufunga nezvemumvuri urwo zvisungo zvekuda nyika zviripo uye izvo zvakawanda, sezvo iwe uchizokwanisa kuongorora kubva panguva dzino chaidzo. Nekuti iyo mikana yekusavapo ivo vanogara vakavanzika uye unomhanya nenjodzi yakakomba kubva kumipiro yako yezvemari. Takatarisana nematambudziko emari enharaunda yakazvimiririra ichiburitsa zvimwe zvezvisungo zvekuda nyika. Ndiwo mubhadharo wauchazobhadhara kuti uwane kudzoka kwakagadziridzwa zvakanyanya kune zvaunofarira.
Kune rimwe divi, isu hatifanire kukanganwa kuti iyi kirasi yezvigadzirwa zvemari inowanzo kuda mazwi akareba kwenguva refu. Kazhinji pamusoro pemakore matatu kana mana uye izvo zvinotungamira kwauri kuti uve nemari yacho isingachinjike kwenguva yakawandisa. Ehezve, iwo ausingazowane anozove akakosha nguva, sezvinoitika pamwe neyakagadziriswa-nguva bhangi dhipoziti. Kwamunogona kuisa mari yako mumazuva mashoma kana mavhiki. Izvi, kune rumwe rutivi, hazvigone kuitwa mune izvo zvinonzi kuda nyika zvisungo.
Musiyano kubva kune imwe nharaunda kuenda kune imwe
Chipo chiripo mukirasi ino yezvigadzirwa zvemari zvakagadziriswa chakakura, kunyange hachiwanzo kuwanikwa kana uchichida. Kubatsira kwako kuchagadziriswa uye kuvimbiswa, chero chii chinoitika mumisika yemari. Mupfungwa iyi, hapana mubvunzo kuti inogona kutaridzwa seyakavanzika chigadzirwa mukutarisana nekusagadzikana mumisika yemari. Nenjodzi dzatataura pamusoro uye dzinofanirwa kuongororwa nekuti chigadzirwa chakaomesesa kubva pano maonero. Izvo hazvisi nyore kuhaya mabonds akadaro seakanaka. Kwete zvishoma.
Kune rimwe divi, zvisungo zvekuda nyika hazvigone kudzimiswa kare, uye haugone kana kuzvimutsiridza zvawo. Izvo zvigadzirwa zvakasarudzika zvinotongwa nemitemo yavo uye pamusoro pezvose nemamiriro ehupfumi enharaunda dzenyika dzakazvimiririra. Ndidzo dzichava idzo dzinozopedzisira dzaona yako purofiti chaiyo. Kufanana nekoponi iyo iwe yaunotora pakupera kweiyi modhi kune yakanyanya kudyara.
Iko kwaunogara uchiona kuti kune nharaunda dzakazvimiririra dzinovimbika kupfuura vamwe, asi izvo nekudaro kufarira kwavo kwegore kunozove kushoma. Iyi ndiyo hwaro hwakavakirwa zvisungo uye izvo zvakasiyana zvachose kubva kune mamwe mari yakatemwa. Chero zvazvingaitika, iri imwe sarudzo nyowani yaunayo panguva ino yekuita kuti mari inowanikwa irambe ichibatsira kubva ikozvino. Pamusoro pehumwe hunyanzvi hwekufunga huchave hwenyaya yekumwe kuongorora kwekunzwisisa kuri nani nemunhu wese.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ehupfumi Zvemari » Zvigadzirwa zvemari » Patriotic zvisungo: imwe nzira yekudyara